192.168.1.254 router ဝင်မည်
192.168.1.1 login အင်ဖို
အကောင်းဆုံး 192.168.1.1 အဆင့်အားဖြင့်ဝင်မည်လမ်းညွှန်အဆင့်
ဇန္နဝါရီလ 8, 2019 Denial245
အဆိုပါ 192.168.1.254 က IANA ကနေ reserved သောတိကျတဲ့အကွာအဝေးအထိ fit ပါလိမ့်မယ်ဆိုလိုတာကပုဂ္ဂလိက IP လိပ်စာဖြစ်ပါသည် (Internet Assigned Numbers Authority) ပုဂ္ဂလိကအကွာအဝေးအဖြစ်. လေ့, ကျွန်တော်တစ်ဦးသစ်ကို router သို့မဟုတ် modem ကိုဝယ်သည့်အခါသူတို့ username နှင့် password ပေး. ဤသည် username နှင့် password ကိုနောက်ထပ်ဆက်သွယ်မှုကနေသင်တို့ကိုကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်.
သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင် modem သို့မဟုတ် Router က၏စကားဝှက်ကိုမေ့သွားတယ်နှင့်အတူဖြတ်ပြီးလာရာအချို့ကိစ္စရှိပါတယ်. ဒါကြောင့်သင်ကအဲဒီအခြိနျမှာအဘယ်သို့ပြုနိုင်, ငါသည်သင်တို့ကိုသင့် router ကိုရယူလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ကဤမျှလောက်ဒုက္ခဖြစ်စေခြင်းငှါထင်. သင်တို့မူကား, စိုးရိမ်ပူပန်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး, ဒီနေ့ရဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာငါသည်သင်တို့ကိုပြဿနာများ၏သမျှသောဤမျိုးကိုဖြေရှင်းပေးရန်သင့်အားကူညီပေးပါမည်နှငျ့သငျအလွန်လျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲရန်နိုင်ပါလိမ့်မည်သည့်အချို့သောအရေးကြီးသောလမ်းညွှန်နှင့်အကြံပြုချက်များကိုပေးစေခြင်းငှါသွားပါ၏.
192.168.1.254 IP Address ကို modems အသုံးပြုသောနိုင်ပါသည်, router သည်, ထိုကဲ့သို့သောဘျနှင့် DVRs အဖြစ်နှင့်အခြားတွေအများကြီး devices များ. ဒါဟာအားလုံး Cisco သည် routers နှင့်ကိရိယာများပေါ်တွင်တည်ရှိသော control panel ထဲက၏ default အနေနဲ့ IP လိပ်စာဖြစ်ပါသည်. အသုံးပြုသူများသည်လျင်မြန်စွာဝင်ဝဖြင့်ဒီ control panel ကို access လုပ်နိုင် 192.168.1.245 IP Address ကို မည်သည့် web browser ကို URL bar မှာသို့.
ဤ 192.168.1.254 IP address ကိုအများအားဖြင့်ထိုကဲ့သို့ Thompson က ADSL router များအဖြစ်ခေတ်မီ router များအသုံးပြု, Linksys switches များ, TP-Link ကို Alcatel ADSL modem routers, 3com router များ, Westell ADSL modem, 2ဝါယာကြိုး router များ, router သည်၏ ADSL ဘီလီယံ, SRW2023 နှင့်များစွာသောထက်ပိုတဲ့ router.
အကျိုးရှိစွာအသုံးချသောအမှတ်တံဆိပ်၏အချို့ 192.168.1.254 ပါဝင်:
ဘီလီယံကို router များ / modem
Westell DSL modems (တစ်ခုတည်းသောအမေရိကန်)
Netopia / ကေမန် Gateway
တချို့က Linksys router များ / modem
3com router များ / modem
သင်သည်သင်၏ IP လိပ်စာကို Username နှင့် Password ကိုမေ့နေလျှင်အဘယ်သို့ပြုရပါဖို့?
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းများ, ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, သင်သည် router ကို turn off ရန်လိုအပ်ပါတယ်. နောက်တစ်ခု, သငျသညျစာနယ်ဇင်းရန်ရှိသည်များနှင့်နောက်ဘက် panel ကိုအပေါ်ပြန်ညှိမှုခလုတ်ကိုကိုင်ထားပေမယ့်သင်တစ်ဦး pin ကိုသို့မဟုတ်ချွန် pin ကိုလိုအပျကွောငျးလုပ်ဖို့, သို့မဟုတ်ပြီးတော့သံလိုက်အိမ်မြှောင်နှင့် Router ကဖွင့်. သို့သော်ယင်းသို့ button ကိုဆုံးရှုံးနှင့်သင့်အကြောင်းအဘို့အခလုတ်ကိုကိုင်ထားအပေါ်စောင့်ရှောက်ရန်မလိုပါ 5- 10 သင့် router ပေါ်မှာ switching ပြီးနောက်စက္ကန့်. ထိုအခါသင်သည် reboot လုပ်ပါ device ကိုများအတွက်ခလုတ်နဲ့ချောင်းမြောင်းလွှတ်ပေးရန်နိုင်ပါတယ်ပြီးနောက်. ယခုတွင်သင်သည်ကွန်ယက် cable ကိုမှတဆင့်သို့မဟုတ် Wi-Fi ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်၏ router ရန်သင့် PC ကိုသို့မဟုတ် Laptop ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်.
အများစုမှာဘုံအသုံးပြုသူ ID နှင့် Password များကိုစာရင်း
အများစုမှာဘုံ Id ရဲ့ & passwords များကို
admin ရဲ့ / admin ရဲ့
အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူအားမျှ
admin ရဲ့ / အဘယ်သူအားမျှ
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး / အဘယ်သူအားမျှ
admin ရဲ့ / လွတ်
default username နှင့် password
router မော်ဒယ် အသုံးပြုသူစကားဝှက်
2သံကြိုး အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူအားမျှ (သို့မဟုတ်) အလွတ် / လွတ်
Aztech admin ရဲ့ / admin ရဲ့ (သို့မဟုတ်) အသုံးပြုသူ / အသုံးပြုသူ (သို့မဟုတ်) အလွတ် / လွတ်
ဘီလီယံခန့် admin ရဲ့ / admin ရဲ့ (သို့မဟုတ်) admin ရဲ့ / password ကို
Motorola က admin ရဲ့ / password ကို (သို့မဟုတ်) အလွတ် / motorola (သို့မဟုတ်) admin ရဲ့ / admin ရဲ့
Netopia admin ရဲ့ / 1234 (သို့မဟုတ်) admin ရဲ့ / admin ရဲ့ (သို့မဟုတ်) admin ရဲ့ / password ကို (သို့မဟုတ်) admin ရဲ့ / လွတ်
SparkLAN အလွတ် / လွတ်
သွန်မ်ဆင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး / CPE.hgw.12 (သို့မဟုတ်) အုပ်ချုပ်ရေးမှူး / အဘယ်သူအားမျှ (သို့မဟုတ်) admin ရဲ့ / admin ရဲ့ (သို့မဟုတ်) အဘယ်သူမျှမ / အဘယ်သူအားမျှ (သို့မဟုတ်) အလွတ် / admin ရဲ့
TP-Link ကို admin ရဲ့ / admin ရဲ့
Westell admin ရဲ့ / password ကို (သို့မဟုတ်) admin ရဲ့ / admin ရဲ့ (သို့မဟုတ်) admin ရဲ့ / လွတ်
Linksys admin ရဲ့ / admin ရဲ့ (သို့မဟုတ်) admin ရဲ့ / အဘယ်သူအားမျှ
Netgear အဘယ်သူမျှမ / default အနေနဲ့
Arris admin ရဲ့ / password ကို
Belkin admin ရဲ့ / admin ရဲ့
Synology admin ရဲ့ / admin ရဲ့
Asus က admin ရဲ့ / admin ရဲ့
Cisco သည် admin ရဲ့ / 1PTV-ADM1N
D-Link admin ရဲ့ / စင်တာ
Sitecom sitecom / sitecom (သို့မဟုတ်) အလွတ် / sitecom
သွန်မ်ဆင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး / အဘယ်သူအားမျှ (သို့မဟုတ်) admin ရဲ့ / admin ရဲ့
Gigabyte အလွတ် / လွတ် (သို့မဟုတ်) admin ရဲ့ / admin ရဲ့ (သို့မဟုတ်) အလွတ် / admin ရဲ့
IOGear admin ရဲ့ / admin ရဲ့
Ovislink admin ရဲ့ / airlive
Router Password ကိုပြောင်းလဲနည်း?
သင်သည်သင်၏ router ကို admin ရဲ့ panel ကမှ login တစ်လမ်းရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်. ထို့နောက် router ကိုရဲ့ login ပြည့်စုံခြေလှမ်း y ကခြေလှမ်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအောက်တွင်ဒီစီးဆင်းကျေးဇူးပြုပြီး.
တစ်ဦးသည် router ရဲ့ default password ကို admin ရဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အသုံးပြုသူအမည်အလွတ်ထွက်ခွာရမည်ဖြစ်သည်. လုံခြုံရေးရည်ရွယ်ချက်, Router ကို၏ default အနေနဲ့ password ကိုတချို့အစိုင်အခဲ password ကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုပါတယ်.
အဆင့် 1: ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, Router ကို၏ setup ကိုစာမျက်နှာကိုသွားပါ.
အဆင့် 2: ထိုအခါအုပ်ချုပ်ရေး tab ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ.
အဆင့် 3: ထိုအခါစီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းကနေ, သငျသညျကိုအတည်ပြုနိုင်ဖို့ Router Password ကိုလယ်ထဲမှာစကားဝှက်အသစ်ရိုက်ထည့်ပါနှင့် Re-Enter ရန်လိုအပ်ပါတယ်.
အဆင့် 4: နောက်ဆုံး၌, သငျသညျကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန် Settings option ကိုသို့နှိပ်ပါလိုအပ်. ဒါပဲ! ဒါက Router Password ကို reset နှင့်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်.
သမျှသောအကြောင်းကိုခဲ့သည် 192.168.1.254 IP Address ကိုပုံမှန် Router အသုံးပြုသူအမည် & Password ကို. ငါသည်သင်တို့ကိုဒီ post နဲ့တူယောက်ျားတွေမျှော်လင့်, ဒါပေမယ့်သင်ဤ post ကိုနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်ပြဿနာနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပါလျှင်, ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့ကိုမှတ်ချက်ပေးရန်ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသင့်ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်, ကျွန်ုပ်တို့၏ site သွားရောက်လည်ပတ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်စကား.
192.168.2.1 username & Password ကို – 192-168-1-1l.com
Netgear Router ဝင်မည်
Linksys Router ဝင်မည် & Linksys Router Configuration ကိုလမ်းညွှန်
ဘယ်လိုသုံးစွဲနည်း 192.168.0.1 IP ကို ​​Router ဝင်မည်နှင့်အုပ်ချုပ်ရေး
192.168.1.1 || ဘယ်လို login မှ 192.168.1.1 IP Address ကို?
ယခင် Post မှ:ယင်းကဘာလဲ 192.168.0.0 IP Address ကို?
next Post:192.168.2.1 username & Password ကို – 192-168-1-1l.com
Router ရဲ့ IP Address ကိုရှာပါ
router ရဲ့ IP Address ကို
TP-Link ကို Router
WordPress ကိုအဓိကအကြောင်းအရာ: Wellington အားဖြင့် ThemeZee.